SOMALILAND: Curashada Bisha RAMADAAN, Waayaha Danyarta & Go’aammadii Xukuumadda Ee La Dagaalanka Sicir-bararka Dollarka Oo Socon La’ Yaab - Wargane News
Home Somali News SOMALILAND: Curashada Bisha RAMADAAN, Waayaha Danyarta & Go’aammadii Xukuumadda Ee La Dagaalanka...
“Xukuumaddu ma oga dhibaatada haysata Shacabkooda, oo waxay cunayaan Digaaggaa laga keeno Dalalka Dibadda…” Dareenka Shacabka
Dadweynaha Danyarta ah ee Reer Somaliland, ayaa la daalaa-dhacaya Sicir-bararka Lacagta Dollarka oo saamayn weyn ku leh Qiimaha Quutal-daruuriga ah.
Sicir-bararka Lacagta Dollarka oo soo taagnaa Dhowrkii bilood ee u dambeeyay ayaa dhawaan waxa Xukuumadda Somaliland sheegtay inay wax ka qabanayso isla-markaana Lacag Dollar ah oo ay ku jebinayso ay Suuqyada ku siideynayso.
“Lacag baanu gelin doonaa Berri haddii Alle yidhaahdo Suuqyada (Dalka), Midhahiisana aanu jecelahay inay Dadku si dhaqso ah u dareemaan in Shilinkooda (Somaliland) uu qiimeeyo soo yeesho.” Ayuu yidhi, Guddoomiyaha Baanka dhexe ee Somaliland Mr. Dhoobaale oo Xuskii 18-ka May ka hor ka hadlayey Shir-jaraa’id oo isaga iyo Wasiirka Maaliyaddu si wada jir ah u qabteen.
Laakiin, taasi waxba kama hirgelin, waxaana illaa hadda oo ay soo gashay Barakaysan ee Ramadaan uu Suuqyada Boqolka Dollar lagu kala sarrifanayaa Lacag 850,000 oo Gacanta hore ah iyo 900.000 kun oo Gacanta dambe ah, taasi oo Macnaheedu yahay inuu halkiisii taagan yahay.
Sicir-bararka Lacagta Dollarka oo saamayn xooggan ku leh Qiimaha Maceeshadda Quutal-daruuriga ah, ayaa waxa si joogta ah Cabasho uga muujiya Dadweynaha Danyarta ah ee Reer Somaliland, sida Dadka Ganacsiga yaryar noloshooda ku maareeya ee Shilinka Somaliland wax ku iibiya isla-markaana Dollarka ku soo iibsada waxay iibiyaan.
Dadka sida joogtada ah uga Cawda waxa ka mid ah Haweenka Khudradleyda ah ee Suuqyada Hargeysa ku iibiya Khudaarta, kuwaasi oo ay ka mid tahay Hooyadan oo Warbaahinta u sheegtay sidan Shalay, “Kaash baanu wax ku iibinaa, Kaashkiina Dollarkii wuu gaadhi waayay, wixii Kaash ah meel baanu ku ururinaa oo Dollar jaban baanu la sugnaa, ILAAHAY waxaanu ka rajeynaynaa inuu Dollarkaa hoos nooga rido.”ayay tidhi.
Sidaasi oo kale, Hooyo ka mid ah kuwa Khudradda iibiya oo la hadashay Warbaahinta ayaa iyaduna tidhi “Khudradda aanu iibinaa waxay nooga timaaddaa Itoobiya iyo Masar, midna waxay noogu timaaddaa Lacag Bir ah, Lacagna Dollar, annaguna Dollar waxba kuma iibino oo Somaliland-baanu wax ku iibinaa, markaanu is nidhaahno Dollar ku beddela kor buu noogu kacaa, mar walbana Khasaare ayaanu ku suganahay, markaa Dawladdayada waxaanu ka codsanaynaa inay ka qabato wixii ay ka qaban kareyso.”
Sidoo kale, qaar ka mid ah Dadweynaha aan Ganacsatada ahayn ee Magaalada Hargeysa oo la waydiiyey Dareenkooda ku aaddan Sicir-bararkan ku soo beegmay Bisha Barakaysan ee Ramadaan, ayaa Ganacsatada ugu baaqay inay u naxariistaan Dadkooda Danyarta ah oo ay Bisha Ramadaan ka jebiyaan Qiimaha Maceeshadda, “Waxaan leeyahay Ganacsatadu Bisha Ramadaan Awgeed qiimaha Maceeshadda ha u jebiso Dadka Shacabka ah ee Danyarta ah, ileyn Xukuumaddu ma oga dhibaatada haysata Shacabkooda, oo waxay cunayaan Digaaggaa laga keeno Dalalka Dibadda.” Ayuu yidhi, mid ka mid ah Dadweynaha Dareenkooda Cabbiray.
Muwaadin kale oo isagana la waydiiyey sida uu u arko Wax ka qabasho la’aanka Sicir-bararka ee Xukuumadda Somaliland, ayaa ku jawaabay oo yidhi “Go’aannadii Xukuumadda ee kala dambeeyay wax ka fulay ma jiraan, Halkii Dollar marka Qofku uu Shilinka sito wuxuu marayaa 90 kun oo Shilin. Ramadaan-baa soo gashay, laakiin Dadkii Danyartaa ahaa waxba ma iibsan karayaan, oo Qiimahii Maceeshaddu halkii buu marayaa, Bariistii, Baastadii, Khudaartii iyo wax kasta oo Quutal-daruuri ah.”
Ugu dambayn, Bisha Ramadaan ee aynu bilowgeeda ku jirno, ayaa ku soo beegantay Xilli Dadka Danyarta ahi waajahayaan Sicir-barar aad u culus, kaasi oo si dadban iyo si muuqataba Saamayn ugu yeeshay Noloshooda.